Wal-falmii Kaadhimamtoota Prezidaantummaa Marsaa Xumuraa
Onkoloolessa 20, 2016
Wal-falmii kaadhimatoota filannoo prezidaantummaa lameen – jechuun, ka paartii Ripublikaanii bakka-bu’uun dorgoman – Donaald Traamp fi ka paartii Dimookiraatii bakka-bu’an – Hillary Kilinton gidduutti geggeessame, marsaa safaffaa, jechuun ka xumuraa kana xiinxaltoonni siyaasaa akkamitti ilaalan?
Bara 2014, kutaa Teksaas irraa akka dorgomaa dhuunfaatti, Seneetarummaa Ameerikaaf ka dorgomee turee fi yeroo ammaa, achuma kutaa Teksaas ka jiru – Kooliin Koolejitti, barsiisaa Dinagdee ka tahe – Proofeser Mohammed Abbaa-jabal Xaahirootti telefoonaan haasofsiisnee jirra.
Akka Proofeeser Mohaammed jedhutti, Hilarii Kilinton waan dubbattu itti yaaduun, itti qophaa’uun yeroo kennameefitti akka gaariitti dhimma ba’an. Doonaald Tiraamp garuu, ennaa Kilinton waa dubbatanii fi mormii irratti dhiheessan of irraa ittisuu qofatti fuuleffatanii, carraa guddaa of jalaa dabarsan.
Gaaffii fi deebii guutuu kana cuqaasuun dhaggeeffadhaa
Somaaliyaa Wallaansoo Filannoo Kessa Jirti